Nahoana Train Ride no fomba tsara indrindra To Jereo ny Italia | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > Nahoana Train Ride no fomba tsara indrindra To Jereo ny Italia
Manana entana ny safidy rehefa manapa-kevitra ny fomba dia lavitra. Tahaka ny anaran 'ny sarimihetsika malaza, dia afaka mandeha amin'ny alalan'ny fiaramanidina, fiarandalamby, ary ny fiara. Rehefa mandray ny fitsidihana ny Italia, na izany aza – misy teny perks ny mandalo izy mitaingina ny fiaran-dalamby.
Train Ride Ampionòny
ankizy mankafy ny fiaran-dalamby mitaingina
Zotram-piaramanidina seza Malaza ho fohy ny tongony ny mpijery, ary tsy mahazo mampiasa fitaovana elektronika mandritra ny fiaramanidina sy ny fipetrahana. Midika izany fa fohy sidina, ianao afa-miala amin'ny toerana kely noho ny ankamaroan'ny ny fiaramanidina raha tsy misy ny fanelingelenana natolotry ny finday avo lenta ary teknolojia, this is really different from a train ride.
Matetika fiara kely manome toerana bebe kokoa, fa ny diany dia afaka ny ho tsara loatra iny sy mijaly ny olona sasany avy amin'ny fiara aretina – indrindra fa amin'ny dia lavitra rehefa atao ny mamaky na milalao lalao. mitaingina fiaran-dalamby, etsy ankilany, manome aina seza sy ny malamalama mitaingina – uninterrupted ny fahari fiaramanidina sy ny fipetrahana fotoana, indray traikefa hafa from a train ride.
Rehefa nandeha lamasinina hitsangantsangana any Italia, azonao atao ny manandrana ny tena aina ergonomic seza sy ny feo-proofed cabins vaovao haingam-pandeha Frecciarossa 1000 fiaran-dalamby.
Naples any Genoa Lamasinina
Turin ho Genoa Lamasinina
Rimini ho Genoa Lamasinina
Siena ny Genoa Lamasinina
Air Travel manome mahatalanjona avy eny ambony hevitra, afa-tsy nandritra ny fotoana fohy mandra-fiaramanidina niakatra ambony lavitra noho ny ambanivohitra. Na tsy matetika freeways tsara tarehy, lalana eo amin'ny tanàn-dehibe dia afaka manolotra tsara tarehy hevitra. Na izany aza, ny mpamily tsy maintsy nifantoka teny an-dalana, toy izany ihany ny mpandeha hafa dia afaka gaga ny Rolling havoana, na tsara tarehy ranomasimbe. Train mitaingina mamela dia lavitra rehetra mba hankafy ny hatsaran-tarehy voajanahary ivelan'ny varavarankely.
Ny iray amin'ireo zavatra renao avy amin'ny olona izay nandeha tany Italia ny lalamby no tsara tarehy tokoa ny fiaran-dalamby mandeha nandritra ny masoandro mody.
Lamasinina nandehanany in Italia no tena tsara tarehy so make sure you travel along the Cinque Terra between Levanto and La Spezia, na haka diany nidina ny morontsiraka atsinanana amin'ny Rimini ho Catania.
Train mitaingina Travel dia kokoa takatry noho ny fiaramanidina. Car Rental mety ho vidin'ny-mahomby, fa rehefa hametraka fiantohana, mandatsa-dranomaso sy ny fotoana (fotoana bebe kokoa ny hoe mitondra fiara alina ny zavatra ilaina) ny diany fifadian-kanina dia afaka mahazo lafo vidy. Azonao atao ihany koa ny maka ny alina mitaingina lamasinina, fa ny fomba handoavana ny zavatra ilaina sy ny fitaterana ao anatin'ny iray.
Rimini ho La Spezia Lamasinina
ny masoandro ny fotoana eo amin'ny tendrombohitra
Lamasinina ataon-drizareo lavitra vitsy famokarana entona karbaona than planes or cars. Araka ny fanadihadiana, fiara mandefa avo roa heny sandan'ny CO2 than trains do.
Fiaramanidina mahatonga indrindra tontolo iainana. Rehefa mifidy eo manidina na mandray ny fiaran-dalamby, Diniho ity: fiaramanidina mampiasa ny ankamaroan'ny ny solika ho an'ny fiaramanidina sy ny fipetrahana. Raha izany evens avy eo ny halavan'ny-ela ny fipetrany sidina, izany hoe be kokoa ny solika isaky ny kilometatra no ampiasaina ho fohy sidina, toy ny dia lavitra ao anatin'ny Italia.
Tsy vitan'ny hoe izay, ny ankamaroan'ny olona handeha ho any amin'ny seranam-piaramanidina ny fiara na ny fiarakaretsaka, manampy bebe kokoa ny entona karbaona tanteraka. Midika izany fa manao heviny kokoa ny tontolo iainana mba handray ny intercity mitaingina lamasinina fohy noho ny fiaramanidina na fiara.
Ankoatra ny fampiasana solika sy ny solika, misy koa ny feo fahalotoan'ny rivotra, ary koa ny toeram mila fiara ao amin'ny tanàna izay efa tsy sehatra maitso.
Train Ride SOA AMAN-TSARA
Rehefa mandrefy namoizana aina isaky ny mpandeha-kilaometatra, manidina no azo antoka kokoa noho ny be mitondra fiara. Inty no mahatonga: misy tsy fahafahana ny olombelona fahadisoana, ary izany sarotra kokoa ho tonga mpanamory noho ny hahazo ny fahazoan mpamily. Tafiditra ao lalana toe-piainana sy ny harerahana amin'ny lava aelin'ny, fa mora ny mahita ny antony mifidy ny fiaramanidina dia azo antoka kokoa noho ny fiara.
Raha oharina amin'ny fiaran-dalamby, na izany aza, fiaramanidina dia tsy tena toy ny azo antoka. Fiaran-dalamby nandeha tamin'ilay lalana amin'ny miadana hafainganam-pandeha, izay midika hoe tsy misy fahafahana amin'ny nidona raha oharina amin'ny fiaramanidina. Ho an'ny derailment, ny miadana midika hafainganam-pandeha tsy mety.
Florence ho any Rimini Lamasinina
Roma ho any Rimini Lamasinina
Milan any Rimini Lamasinina
Venice ho any Rimini Lamasinina
Eo ho eo freeway làlan mihetsiketsika 2,500 ny olona isaky ny ora – raha ny mahazatra dia afaka mitondra lamasinina tsipika 50,000 ny olona isaky ny ora. Izany mahatonga mitaingina lamasinina mandeha haingana betsaka noho ny fiara, indrindra fa rehefa miadana nahatonga-mampihetsi-po fifamoivoizana, mijanona eny an-dalambe, fifamoivoizana jiro ary ny tsy azo ihodivirana ratsy mifandimby. Ankoatra izany, ny mpamily tsy maintsy mifantoka teny an-dalana, ka Ho afaka mamaky, fianarana, torimaso na ny asa.
Manidina lavitra mety haingana kokoa noho nandeha lamasinina, fa ho fohy lavitra, rivotra dia tsy afa-mandeha ny fotoana. voalohany, dia mila mahazo any amin'ny seranam-piaramanidina – Matetika no toerana lavitra ny trano fonenana faritra. Ianao koa dia mila ho eo, fara fahakeliny, ny ora eo anoloan'ny fiaramanidina fotoana izay hijery sy hamaky ny fiarovana. Raha ianao hijerena entana, ianao no mila manampy miandry azy eo Carousel. Ary izany rehetra alohan'ny fiaramanidina ny fahatarana, na mandeha na fiara fitateram-bahoaka eo amin'ny seranam-piaramanidina ny terminal sy ny vavahady.
masoandro sy ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby
Airports Matetika no toerana ivelan'ny tanàna, izany hoe indray mandeha ianao tanety, ianao mbola mila maka fiara, bisy na lamasinina ho any an-tanàna. Raha mikasika ny nahita ny zavatra hita, lalana ao amin'ny tanàna be mponina toerana azo sy sarotra ny fidirana amin'ny fiara, dia nandray ny fiaran-dalamby dia mahatonga be dia be ny hevitra ao amin'ny tanan-dehibe amin'ny faritra.
Mitady hividy mitaingina lamasinina tsy misy tapakila famandrihana saram? Visit SaveATrain.com Try miditra mora indrindra tahan'ny fiaran-dalamby.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)